एकाएक मन्त्रीहरूले दिए सामूहिक राजीनामा, के हुन्छ अब ? — Imandarmedia.com
एकाएक मन्त्रीहरूले दिए सामूहिक राजीनामा, के हुन्छ अब ?
काठमाडौं। आर्थिक संकटबाट जुधिरहेको बेला श्रीलंकाका मन्त्रीहरुले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षे बाहेक श्रीलंकाका सबै २६ जना मन्त्रीहरुले सामूहिक राजीनामा दिएको बीबीसीले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापक्षे र राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षे दाजुभाइ हुन्। चरम आर्थिक संकटका कारण श्रीलंकाका नागरिकहरुको आक्रोश बढ्दो छ। सरकारविरुद्ध सडकमा प्रदर्शन हुन थालेपछि र लुटपाटका घटना बढेपछि देशभर कर्फ्यु लगाइएको छ।
सो कर्फ्युकोसमेत उल्लंघन गर्दै श्रीलंकाका नागरिकहरु प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।प्रदर्शन रोक्ने प्रयासमा सडकमा सेना परिचालन गरिएको छ। कर्फ्यु उल्लंघन गर्दै प्रदर्शन भएलगत्तै मन्त्रीहरुले सामूहिक राजीनामा दिएका हुन्।
शिक्षामन्त्री दिनेश गुणवर्धनले मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुले आइतबार प्रधानमन्त्री समक्ष राजीनामा पत्र बुझाएको जानकारी दिएका छन्। सन् १९४८ मा ब्रिटेनमा स्वतन्त्र भएपछिकै खराब आर्थिक स्थितिबाट श्रीलंका गुज्रिरहेको छ।
डलरको कमीका कारण श्रीलंकाले अत्यावश्यक खाद्यान्न, औषधि, इन्धन लगायतका वस्तुसमेत आयात गर्न सकेको छैन। यसअघि कपि र मसी किन्ने पैसा अभावका कारण विद्यालयको परीक्षा स्थगित गरिएको छ।
पेट्रोलपम्प र खाद्यान्न पसलहरुमा मानिसहरुको लामो लाइन देखिन्छ ।यस्तै चरम विदेश मुद्रा अभावले महँगी बढ्नुका साथै, इन्धन र विजुलीसमेतको अभाव भएपछि संकटकाल घोषणा गरिएको थियो।
श्रीलंकामा अभाव सिर्जना भएसँगै हिंसात्मक आन्दोलनसमेत सुरु भएका थिए। गत बिहीबारमात्रै राजधानी कोलम्बोस्थित राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्षको निवास नजिकै आन्दोलनकारीले प्रदर्शन गरेका थिए।
शुक्रबार केही प्रदर्शनकारी पक्राउ परेका छन्। बीबीसीका अनुसार संकटकाल घोषणा भएसँगै हिंसात्मक प्रदर्शनमा संलग्नलाई वारेन्टविनै पक्राउ गर्न भनिएको छ।
अहिले श्रीलंका ठूलो आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ। देशमा दैनिक १३ घण्टा लामो समयसम्म विद्युत कटौती हुने गरेको छ ।इन्धनको अभाव छ, अत्यावश्यक खानेकुरा र औषधिको अभावका माझ जनताको आक्रोश नयाँ चरम विन्दुमा पुगेको छ।
देश आर्थिक संकटमा फसेसँगै औषधि र अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भएपछि पूर्वनिर्धारित शल्यक्रियासमेत रोकिएको छ। श्रीलंकाको पेराडेनिया शिक्षण अस्पतालले औषधिको अभावमा शल्यक्रिया रोकेको हो।
अस्पतालका निर्देशक एचएम अर्जुना तिलकरत्नेले भने, ‘हामीसँग रहेको औषधि र सामग्री आकस्मिक सेवामा आउने बिरामीको ज्यान बचाउनका लागि राख्दै अरु पूर्वनिर्धारित शल्यक्रिया रोकेका छौं।
उनले स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने निकायमा यसबारेमा जानकारी गराइसकेको बताए ।श्रीलंकामा औषधि अभावमा शल्यक्रिया रोकिएको खबर सार्वजनिक भएपछि भारतले आवश्यक सहयोग गर्ने तयारी गरेको छ।
भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले भारतका उच्चायुक्तलाई यसबारेमा छलफल गर्न र यसबारेमा भारतले के सहयोग गर्न सक्छ भन्ने बारेमा बुझ्न भनेका छन्। विदेशी मुद्राको संचिती घट्दै गएपछि श्रीलंका गम्भीर आर्थिक संकटमा फसेको छ।
र त्यहाका साढे २ करोड नागरिकमा यसको प्रत्यक्ष असर परेको छ। पैसा अभावकै कारण कागज किन्न नसकेपछि यसअघि श्रीलंका ४५ लाख विद्यार्थीको परीक्षा रोकिएको थियो। – एजेन्सीको सहयोगमा